ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : (27) ၅ယောက်ကသယ်၊၃၀ကကြိတ်၊ဖျာကြီးနဲ့ လိပ်၊ ဂူကြီးထဲသွင်း
(27) ၅ယောက်ကသယ်၊၃၀ကကြိတ်၊ဖျာကြီးနဲ့ လိပ်၊ ဂူကြီးထဲသွင်း
ငယ်ငယ်က ကလေးတွေဆိုဖူးတဲ့ ကဗျာ ၊ ဆိုလိုရင်းမှာ
၅ယောက်ကသယ် (လက်ငါးချောင်းဖြင့် အစားကို သယ်ယူသည်)
၃၀ကကြိတ် (သွား အချောင်း၃၀ ကကြိတ်ဝါးသည်။ တကယ်တော့သွား ၃၂ ချောင်းရှိသည်။)
ဖျာကြီးနဲ့ လိပ် (လျှာဖြင့်ကြိတ်ချေထားသော အစာများကို လိပ်ယူပြီး)
ဂူကြီးထဲသွင်း (အစားအိမ် ကို သင်္ချိုင်းဂူကြီးအဖြစ် တင်စားထားသည်။)
အားအားနေရင် ဆိတ်ပါးစပ်လို တစ်ခုပြီးတစ်ခု စားနေမိတယ်။ ဘာမှန်းမသိ ပျင်းရင်စား၊ စိတ်ဓါတ်ကျရင်လဲစား၊ ပျော်ရင်လဲစား၊ ခင်ရာမင်ရာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ ရင်လဲစား။ ဘာမှန်းမသိ အကုန်ဝါး၊ တနေ့ တခြား ခြူခြာလာတဲ့ကျန်မာရေးကြောင့်အစားဆင်ခြင်ဖို့အကြောင်းတွေဖြစ်လာတယ်။
အစားကို ဆင်ခြင်စားတဲ့အခါ မှာ စိတ်လက် ပေါ့ပါးလာတယ်။ ညကြီးအချိန်မတော် ဆိုရင်လဲ မဆာဘဲ မီးဖို ချောင်မှာ ပေါင်မုန့် မီးကင်၊ ဂျမ် သုတ်၊ ကော်ဖီထဖျော် အကျင့်ပျက် နေတာကြာပြီ။ လက်ဆောင်ရတဲ့ biscuit, muffin, cross bun, cake, အဲဒါတွေအပြင် လွယ်လွယ်ကူကူ သောက်လို့ရတဲ့breakfast cereal ဒါတွေကို မြင်တိုင်း တဇွတ်ဇွတ် စားနေမိတယ်။ တကယ်ဆာသလားဆို တော့လဲမဟုတ်ဖူး။
အခုအချိန်မှာ အစားချင်ဆုံးဟင်း မြန်မာ အစားအသောက်တွေ ကို ချရေးထားလိုက်တယ်။
ပဒတ်စာ နှင့် ကင်ပွန်းချဉ်ရွက် ဟင်းချို
ငါးခြောက် မုန်လာဥ ချဉ်ရေဟင်း
ချဉ်ပေါင်ရွက် အရည်စပ်စပ် ငရုတ်သီးဖြင့်ကြော်
ပရစ်ကြော် နှင့် ရေနွေးကြမ်းခါးခါး
ပုဇွန်ဇိတ် လေးများကို ကြက်သွန်နီ၊ငရုတ်သီးစိမ်း၊ သံပုရာသီး၊ဆီစိမ်းနှင့်သုတ်
ခရမ်းချဉ်သီး ငပိချက် နှင့် တွဲဖက်စားစရာ ပဲကတ္တပါပြုတ်ကြော်
မုန့် လုံးကြီးကြော် (ပဲဌာပနာ)
မုန့် လုံးကြီး အုန်းနို့ ဆမ်း
ဗယာကြော်သုတ် (ဂျက်ဆင်ရှေ့ နား ဆိုင်းထမ်းနဲ့ ရောင်းတဲ့ ဟင်းရည်ပူပူနဲ့ အသုတ်)
ပဲပြားသုတ် (ယုဇန ပလာဇာအောက်မှာ ဗန်းနဲံ့ ရောင်းတဲ့ ငံပြာရည်နှင့် ဂေါ်ဖီများနဲ့ အသုတ်)
အစုံသုတ် (ခေါက်ဆွဲ၊ထမင်းနီ၊အာလူး၊ဆီချက်၊ပဲတီချဉ်၊ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ၊
နှမ်းဖတ်ချဉ်သုတ် (ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းများများဖြင့်)
မယ်ဇလီဖူး ကြော် (ဆနွင်းကဲကဲဖြင့်)
မယ်ဇလီရွက် နှင့် ဆန်လှော် ဟင်းချို
ဗုံလုံသီး အစာသွတ်ကြော် (ပုဇွန်ခြောက်ပါသည်။)
ဓညင်းသီးပြုတ် တို့ စရာ
ကြောင်လျှာသီး ပြုတ်တို့ စရာ
ဂေါ်ရခါးညွန့် တို့ စရာ
ကြက်ဟင်းခါးညွှန့် တို့ စရာ (ရခိုင်ငပိထောင်းဖြင့်)
မုံလာချဉ်၊ ဂဒတ်ချဉ်၊ ဟင်းကလာချဉ်၊ ပဲပင်ပေါက်ချဉ်၊ သရက်ချဉ်၊တမာချဉ်
ရွှေနိုင်ငံတွင် အသီးအရွက်ပေါသည်။ သို့ သော် ကုန်ဈေးနှုံးက တော့ မပေါ။
သတင်းစာထဲ မှာ နွားချေးဖြင့် လျှပ်စစ်မီး ထုတ်ဝေနိုင်တော့မည်တဲ့။
နွားတွေ အီးပါဖို့ သာပြင်ထားတော့ ။
ခုထိတော့ ရေနံဆီမီးခွက် မှိုင်းခိုးကိုရှူရင်း နွားချေးမီးကို မျှော်လင့်နေရဦးမည်။
Υour aгticle offerѕ verified necessary to mуѕelf.
It’s rеally eduсatіonаl anԁ you're simply certainly very well-informed of this type. You possess opened up our eyes for you to various thoughts about this matter with intriguing and reliable content material.
Takealook at my homepage ... buy phentermine
Hi there to every single one, it's actuallyagood for me to payavisit this web site, it includes valuable Information.
Visit my web site; free estimate for appliance repair Temple Terrance
Feel free to surf to my blog :: dryer repair Clearwater - http://www.youtube.com/watch?v=bY25GypplEg -